योग्यता थाहा पाउनुहोस् र प्राधिकरणमा जागिर खानुहोस्, २७७ भित्र पर्नुहोस् | Arthatantra.com
योग्यता थाहा पाउनुहोस् र प्राधिकरणमा जागिर खानुहोस्, २७७ भित्र पर्नुहोस्
काठमाण्डौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २७७ जना कर्मचारी पदपूर्तिका लागि सूचना प्रकाशित गरेको छ । प्राधिकरणले अघिकृत स्तर ९तह ९ सम्म० देखि ड्राइभर (तह ३) सम्म गरी २७७ कर्मचारी माग गरेको हो।
प्राधिकरणले उप–निर्देशक, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, सहायक प्रबन्धक, प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत, इन्जिनियर, समाजशास्त्री, सर्भे अधिकृत लगायत पदमा ५८ जना कर्मचारी माग गरेको छ । साथै, सहायक स्तरमा मिटर रिडिङ सुपरभाइजर (तह ५) ६ जना, माग गरेको छ। यस्तै लेखापाल (तह ५) मा ११ जना, सुपरभाइजर (तह ५) मा ४ जना जनशक्ति माग गरेको छ।
पदपूर्ति समितिले प्रकाशन गरेको सूचना अनुसार सुपरभाइजर सिभिल (तह ५) मा २ जना, सिनियर हेवी इक्वीपमेन्ट अपरेटर (तह ५) मा ४ जना, सिनियर मिटर रिडर (तह ४) १५ जना कर्मचारी माग गरेको छ।
सहायक लेखापाल (तह ४) मा २६ जना, फोरमेन (तह ४) मा ५३ जना, फोरमेन सिभिलमा १ जना, फोरमेन ड्राइभरमा ३ जना कर्मचारीमा माग गरेको छ। मिटररिडर (तह ३) मा २१ जना, इलेक्ट्रिसियन (तह ३) ४६ जना, जुनियर मिस्त्री (तह ३) १ जना कर्मचारी प्राधिकरणले माग गरेको छ।
तह ३ को ड्राइभरका लागि ५ जनाको विज्ञापन प्राधिकरणले गरेको छ। समावेशी समानुपातिक प्रणाली अनुसार पदपूर्ति हुनेछ।
दरखास्तका लागि अधिकृत स्तर तह १० का लागि दरखास्त शुल्क १५५० सय लाग्नेछ। तह ९ का लागि १२५०, तह ८ का लागि १०५०, तह ७ का लागि ९५० लाग्नेछ। यस्तै तह ५ मा ६२५, तह ४ मा ४२५, शुल्क लाग्नेछ।
दरखास्त फाराम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वेबसाइटबाट डाउनलोड गरी कर्मचारी पदपूर्ति माग गरिएका क्षेत्रीय कार्यालयमा समेत बुझाउन सकिनेछ।
दरखास्तको समय माघ २७ गतेसम्म तोकिएको छ। दोब्बर दस्तुरमा फागुन ५ गतेसम्म फाराम बुझाउन सकिनेछ। दरखास्तसाथ पासपोर्ट साइजको फोटो तीनप्रति, नागरिकताको प्रमाणपत्र र न्युनतम शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्नेछ।
२७ पुस २०७३, ११।००
यसमा तह- ६ उल्लेख देखिएन नि । साथै कानुन बमाेजिमकाे आरक्षण काेटा बारे पनि कतै उल्लेख देखिएन । या काेटा नै हटाएकाे हाे कि ?
निजामती कर्मचारीले अन्य क्षेत्रमा व्यवसाय गर्न नपाइने प्रवधान खारेज हुँदै ! काठमाण्डौं । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई सरकारी कामबाहेक अन्य व्यापार–व्यावसाय गर्न […]